चटपटे गफ : ‘भूत, प्रेत पिचाससँग डर लाग्दैन’ भन्छन् राजाराम – Tandav News
चटपटे गफ : ‘भूत, प्रेत पिचाससँग डर लाग्दैन’ भन्छन् राजाराम
ताण्डव न्यूज द्वारा २०७५ बैशाख २९ गते शनिबार १०:५८ मा प्रकाशित
कलाकार राजाराम पौडेलसँग चटपटे गफ
एक हप्ताको लागि प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने के गर्नुहुन्छ ?
कहिल्यै पनि हुन्न । म त्यस्तो सपना पनि देख्दिन् । हुँदै नहुनी चिजको सपना देखेर काम पनि छैन् ।
तपाई कलाकार नभई पहलमान भको भए कोसँग लड्नु हुन्थयो ?
अर्को प्रतिद्धन्द्धीसँग लड्थे । नेपालमा भन्नुपर्दा रमेश विसुराल (हिमालयन टाइगर) सँग लड्थे । म रेस्लर भैदिएको भए तिनिहरु टिक्दैनथे ।
बिहान उठ्ने बित्तिकै लिंग परिवर्तन भएर महिला हुनुभयो भने के गर्नु हुन्छ ?
महिला पुरुष जे भएपनि सबैभन्दा उठ्ने बित्तिकै आँखा खोल्नी हो । त्यही गर्थे ।
तपाइको नजरमा सबैभन्दा हाँसो लाग्दो मान्छे को ?
धेरै विषयमा छ । जस्तो कि, व्यक्तिगत भन्दा वर्गको कुरा गरौं । हाम्रो देशमा विभिन्न थुप्रै जातिहरु छन् । उहाँहरुले बेलाबेलामा सरकारसँग विभिन्न माग राख्नुहुन्छ । हाम्रो देश विभिन्न भाषा भाषि भरिएको देश तर कुनै पनि जातजातिले आफ्नो जातिको गीत बजाएर नाचेको देख्दिन, हिन्दी गीतमा नाचेका हुन्छन् । त्यो देख्दा, त्यस्ता मान्छे देख्दा मरुन्जेल हाँसो लाग्छ ।
मरेर भूत हुनभयो भने कोकसलाई तर्साउनु हुन्छ ?
तर्साउने भन्ने कुराको विश्वास लाग्दैन् । म प्यारामेडिक्स पनि हो । २४ वर्ष हेल्थमा पनि काम गरें । मलाई तर्सायोस भन्ने असाध्यै रहर लाग्ने मान्छे ।
त्यही क्रममा एकपटक विरगञ्ज हस्पिटलमा हुँदा खेरी एउटा डेट बडी लासघरमा राख्ने कुरा भइरहेको थियो । निकै राती भइसकेको हुनाले त्यहाँ लान मिलेन । म सुत्ने कोठामा राख्न लागियो ।
तर त्यो दिन ३ वटासर्पले टोकेको केस आउँदा रातभर जार्गराम बस्नुप¥यो । त्यहाँ सुत्न पाइन् । तर्सायोस भनेर फिल गर्न खोज्ने मान्छे हो । त्यसैले यो भूत, प्रेत पिचाससँग डर लाग्दैन् । बरु जिउँदैसँग डराउनुपर्छ ।
तपाई कस्तो प्रकृतिको मान्छे ?
म शान्त, सिम्पल । कसैको लप्पनछप्पन जान्दिन । आफ्नो सुरले काम गर्छु, कामको विश्वास गर्छु साधारण खालको मान्छे हो ।
कुनै एक फिल्ममा हिरोको अफर आयो भनेर हिरोइन कसलाई छान्नुहुन्छ ?
अफर त आइरहेको छ । जस्तो अहिले ‘१०० कडा १०’ खेलिरहेको छुँ ।
यसमा क्यारेक्टरको हिसावले हिरो मै हो । अहिले जमाना कोल्टे परेको छ ।
चकलेटी हिरोको भन्दा पनि हामी क्यारेक्टर हिरोको जमाना आएको छ । त्यसैले हिरोइन छान्ने जिम्मा कलाकारको भन्दा पनि निर्देशकको हो । त्यस्तो रोलले सुहाउने छान्ने जिम्मा आयो भने मेरै जीवनसाथी ईश्वरी शर्मा पौडेल नै छान्थे होला ।
ज्योति मगरलाई टिका लगाएर आर्शिवाद दिनुप¥यो भने के दिनुहुन्छ ?
उहाँको मैले नाममात्र सुनेको छुँ । दुइचारवटा युटुवमा डान्स हेरेको छुँ । त्यत्ति हो लाइभ भेटेको छैन् ।
नेपालमा कलाकारको वर्गीकरण गर्दा दुई प्रकारका छन् । एउटा आफ्नो कला देखाएर बनेका कलाकार अर्को तिघ्रा देखाएर बनेका तिघ्रे कलाकार । त्यसैले भगवानबाटै उहाँको तिघ्रा सहि सलामत होस् ।
सबैको आँखा उहाँकै तिघ्रामा जाओस् ।
प्रदेश नं २ मा भोली (आइतबार) बिदा
पर्वत ठूलीपोखरीमा पानी उपभोगमा बिबाद